Ebu - Mestech Industrial Limited
Ebu (ebu) ma nwụọ bụ ngwaọrụ iji mee oghere ma ọ bụ akụrụngwa n'ime akụkụ nwere ọdịdị na nha akọwapụtara n'okpuru ọrụ nke ike mpụga. Ngwá ọrụ a nwere akụkụ dị iche iche, na ihe ọkpụkpọ dị iche iche nwere akụkụ dị iche iche. Ọ bụ nhazi nke kachasị gbanwere ọnọdụ anụ ahụ nke ihe iji nweta ọdịdị nke ihe ahụ. Ebu ma nwụọ bụ ngwaọrụ maka imepụta oke. Ngwa nke ebu na - eme ka mmepụta ihe na nrụpụta na - emegharị ngwa ngwa meziwanye akụkụ ya. A maara ya dị ka "nne nke ụlọ ọrụ".
Ebu ma nwụọ nwere ike kewaa ụzọ abụọ dịka njirimara nhazi ha
1. Die: na ngwa nke onu udi nwere ike ime ka ndị siri ike oghere nkewa (blanking) dị ka ngwe udi, ma ọ bụ ekwe extrusion ịkpụzi. A na-eji ụdị ọnwụ a eme ihe maka blanking, ịnwụ ibe, isi oyi na extrusion nke akụkụ.
2. Ebu: a na-agbanye ngwongwo ma ọ bụ mmiri mmiri n'ime oghere ebu, ma ọ bụ na-agbaze ihe siri ike na oghere ebu, jupụta ma mee ka ọ nweta ngwaahịa nwere otu ọdịdị ahụ. Nke a na ụdị ebu na-eji na plastic akụkụ injection ịkpụzi, silica gel ịkpụzi, metal anwụ mgbatị. Ohaneze si na omume, anyị were nke nwụrụ maka ndị na-abụghị ferrous ọla dị ka aluminum alloy na zinc alloy dị ka anwụ
Ọgwụ ebu maka ụgbọala akụkụ
HASCO ogwu ebu
Dị ka ihe nke ngwaahịa ndị e mepụtara site na ebu si akpụzi, a na-ekezi ihe ndị a:
ngwongwo ígwè, ebu plastik, na ebu pụrụ iche.
1.Metal ebu: gụnyere zọ anwụ (dị ka blanking anwụ, ekwe anwụ, ịbịaru anwụ, flanging anwụ, shrinkage ịnwụ, undulating anwụ, bulging anwụ, shaping anwụ, wdg), forging die (dị ka ịnwụ ibe ya nwụrụ, iwe iwe , wdg), extrusion nwụọ, ịnwụ anwụ nwụọ, ibe ya nwụọ, wdg;
2.Nonmetal ebu na-ekewa: plastic ebu, inorganic na-abụghị dara ebu, ájá ebu, agụụ ebu na paraffin ebu. N'ime ha, na mmepe ngwa ngwa nke plastik polymer, ebu plastik nwere njikọ chiri anya na ndụ ndị mmadụ. Plastic ebu nwere ike n'ozuzu kewara: injection ịkpụzi ebu, extrusion ịkpụzi ebu, gas nyere aka ịkpụzi ebu, wdg
The ebu na-anwụ nwere kpọmkwem contour ma ọ bụ uji eze udi, na oghere nwere ike iche (blanking) dị ka ngwe udi site na iji ngwe contour na nsọtụ. Site n'iji ọdịdị nke oghere dị n'ime, oghere ahụ nwere ike ịnweta ọdịdị akụkụ atọ kwekọrọ. Ọnwụ n'ozuzu ya gụnyere akụkụ abụọ: ịnwụ anwụ na ịnwụ anwụ (ma ọ bụ ọkpọ na ịnwụ), enwere ike ikewapụ ma mechie. A na-ewepụta akụkụ ndị ahụ mgbe ha kewara, a na-agbanye oghere ahụ n'ime oghere ịnwụ maka ịmalite mgbe ha mechiri.
Enwere uzo ato na mmeputa ebu: 1.Mold design; Nhazi 2.mold; 3. Nnabata nke ebu
Mestech na-enye ndị ahịa atụmatụ nke akụkụ plastik na akụkụ ígwè, imepụta ihe nkedo ọgwụ, na-anwụ anwụ na nkedo. Na ojiji nke ebu maka oke ihe eji emepụta plastik, akụkụ ọla. Anyị na-atụ anya iso gị rụọ ọrụ iji nye gị ọrụ ịkpụzi ebu na plastik, akụkụ ngwaahịa na ọrụ.